Dibadbaxyo lagu carqaladeynayo bilowga doorashada ku celiska oo Kenya ka bilowday | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dibadbaxyo lagu carqaladeynayo bilowga doorashada ku celiska oo Kenya ka bilowday
Dibadbaxyo lagu carqaladeynayo bilowga doorashada ku celiska oo Kenya ka bilowday
Muqdisho(SONNA) Dibadbaxyo lagu carqaladeynayo bilowga doorashada ku celiska madaxweynaha ayaa ka bilowday qeybo ka mid ah dalkaasi Kenya.
Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo isaga haray doorashada ku celiska ah ayaa ku baaqay in taageerayaashiisu aysan codaynin,maadama uu ka cago jiiday siday wax u dhigeen Guddiga doorashada Kenya oo uu ku tilmaamay inuu masuq maasuq hareeyay.
Kenyatta ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guulaystay doorashadii 8 August, laakiin waxba kama jiraan ayaa laga soo qaaday ka dib markii lagu helay “wax isdabomarino”.
Sanaaqiida codbixinta ayaa la furay 6:00 subaxnimo,iyadoo ay balantu tahay in la soo xiro 5pm,waxaana is diiwaan gelisay si codkooda ay u dhiibtaan 19 million oo ruux oo Kenyan ah.
Banaanbaxyada rabshadaha wata ayaa ka bilowday deegaanada ay ku xoogan yihiin taaageerayaasha mucaaradka ee Kibera ,waxayna taageerayaasha Odinka ay gubayaan taayaro halka Booliska ay banaanbaxayaasha u adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala ceyriyaan.
Wararka ayaa intaasi ku darayaa in ugu yaraan hal xarun oo codbixinta doorashada ka socotay ay rabshado darteed u xirantay.
” Wax micno ah ma sameyneyso codbixinta,waa sharcidaro waxay sameynayaan,waxay doonayaan in mar kale wax xadaan,tani waa ceeb,marka ma doonayo inaan waqtigeyga ku lumiyo codbixin qaldan,” ayuu Alfred Otieno oo ka mid ah dadka mucaaradsan doorashada.
Marka la eego Kisumo,waa goob Odinka uu ku xoogan yahay,qaar ka mid ah xarumaha codbixinta wey furan yihiin balse ma jirto calaamad muujisa dad codkooda bixinaya.
Raila Odinka,ayaa taageerayaashiisa u sheegay ineysan ka qeyb qaadan codbixinta doorashada ka dib banaanbax ka dhacay magaalada Nairobi oo ay isugu yimaadeen taageerayaasha hogaamiyaha Mucaaradka Kenya
Previous articleTaliyaha Ciidamada xooga dalka oo ka tacsiyadeeyey Geeridii Jeneral Maxamed Abshir Muse
Next articleR/wasaaraha Soomaaliya oo dhiggiisa Turkiga kula kulmay Ankara